Loza an-dranomasina Tsy hita popoka ilay lehilahy resi-tory tao anaty lakana
Fitateran’olona an-tsokosoko Sprinter 02 sy Toyota Minibus 01 no tratra
Fiara Sprinter 02 sy Toyota minibus iray no tratra nitondra mpandeha an-tsokosoko niazo an’i Talatamaty sy Ivato ny zoma lasa teo nandritra ny fitsirihina sy fisavana nataon’ny zandary tamin’ireo fiara mihazo iny lalana iny.
Ambanja Fiara mpitatitra nanao lalam-poza 4 no tratra
Taorian'ny didim-panjakana mitondra ny laharana 036 /2020 -MID/REG/DIANA nivoaka ny 29 jolay lasa teo mahakasika ny tsy fahazoan'ny fitateram-bahoaka
Atongombato Mahitsy Maty ilay mpitondra moto niala alika
Nitrangana lozam-pifamoivoizana namoizana ain’olona iray omaly zoma vao maraim-be teny Atongombato Mahitsy, distrikan’ Ambohidratrimo.
Lalam-pirenena Mihoatra ny 1000 isan’andro ireo fiara mikasa hivoakan’Analamanga
Marobe ireo fiara mikasa hivoaka ivelan’ny Faritra Analamanga hihazo ny lalam-pirenena eto amintsika isan’andro. Raha araka ny tatitry ny zandarimariam-pirenena dia mihoatra ny 1000 isa isan’andro izy ireo ka ny 500 hatramin’ny 600 isa amin’izy ireny no tsy maintsy averina avokoa.
Soanierana Maty tsy tra-drano ilay mpitondra scooter
Niala lavaka teny am-pandehanana, nitrosona dia lasa tao ambany kamiaon’ny Jirama niray zotra taminy.
Lehilahy iray 55 taona omaly alahady tamin’ny 02 ora maraina no tsy hita popoka hatramin’ny fotoana nanoratanay rehefa resin-tory teny ambony lakam-be iray avy ny Mahajanga ary latsaka tany anaty ranomasina.
Teo anelanelan'i Soalala sy Besalampy no nitrangan’ny loza. Fiharena Milivea na i Leba no anaran’ity lehilahy niharan-doza ity. Teraka ny 06 martsa 1965 tao Analavory-Miarinarivo izy. Zanak'i Solomony sy Zoariline Ranovala izy. Fotsy fihodirana ny lehilahy ary malemy volo. Ireto laharam-pinday ireo moa toy ny 032 58 479 16 sy ny 034 46 877 31 ary ny 033 91 861 29 no hahazoana ireo fianakaviany ho an'ireo manam-baovao mikasika azy.